Maitiro Ekusarudza Iyo Shopify Musoro weYako Kudonhedza Chitoro? - Sarudza yako Kudonhedza Mentors kweKudonhedza Kosi
Sarudza yako Dropshipping Mentors yeDropshipping Course
Academy Vhura Zvitoro Sarudza Matimu
Maitiro Ekusarudza Iyo Shopify theme YeYako Kudonhedza Chitoro?
Tumira zuva Muna January 2020 8 28 Day
Paunovhura chitoro chinodonhedza paShopify, unofanirwa kutsvaga yakanakisa Shopify theme yechitoro chako. Kutsvagurudza kunoratidza kuti 70% yevanhu havavimbi mawebhusaiti asina kugadzirwa. Chitoro chisina kugadzirwa zvakanaka chinoita kuti vatengi vako vatarisire vatarise pakutanga. Yako webhusaiti theme ichaisa pasi hwaro hwekuti vanhu vachakuona sei iwe.
Kuti usarudze yakanakisa Shopify theme, iwe unofanirwa kuve neruzivo rwekuti ndezvipi zvinhu zvaunofanira kufunga kana uchisarudza dingindira reShopify kudonhedza zvitoro pamwe neyakanakisa Shopify madhisiki ekudonhedza anowanikwa online.
Zvekufunga nezvazvo Kusarudza Shopify Musoro
Iwo akanakisa Shopify madingindira ekudonhedza pasi anofanira kunge akareruka uye akaumbika saka anofanirwa kuve akagadziridzwa kuchengetedza izere peji reji yekumhanyisa iyo inobatsira zvakanyanya kune Google SEO chinzvimbo uye chengetedzo yevatengi pane yako saiti mukufamba kwenguva. Iyo yakareruka yako Shopify theme ndeye, kunyanya kutarisisa kuchave nekuvandudza ruzivo rwevatengi pawebhusaiti yako iyo, zvakare, ichavandudza shanduko yemitengo. Iyo inokurumidza yako online chitoro mitoro, zviri nani zvichazove zvako uye rako rekudonha bhizinesi. Vashanyi havafarire kumirira masosi kuti atakure uye paavhareji, ivo vanomirira matatu masekondi uyezve tinya kure kana saiti isingatakure. Saka edza kunzvenga Shopify webhusaiti matemplate ayo ane yakawanda yezvinhu zvisina kugadzikana senge dzakabatikana vatakuri, zvisizvo zvisina basa, kana zvinoshamisira vanopuruzira.
2. Nhare Yakasununguka Shamwari
Kupfuura makumi mashanu muzana ezvekutengesa pazvitoro zveShopify zvinoitika pane nharembozha kubva pakauya iyo smartphone. Kana yako Shopify theme iri nhare-inoshamwaridzika, ichaenda kupa irinani zvirinani mushandisi ruzivo kune vese vevako webhusaiti vashanyi. Izvo zvinodikanwa kuti utarise kutaridzika kweako Shopify theme pane ese ari maviri smartphone uye piritsi rako usati watanga chitoro chako kuruzhinji kuti uve nechokwadi chekuti hapana glitits kana uye kana ichishandiswa pane akasiyana madhivhisi. Iwo emahara Shopify madingindira akatogadziridzwa kuti ashandiswe pane ese desktop uye epuratifomu mapuratifomu izvo zvinoreva kushomeka basa kwauri uye chiitiko chiri nani kune ako vatengi.
3. Yako Budget, Zvakaitika uye Zvimwe Resources
Paunenge uchisarudza iyo Shopify theme, zvakakosha kuyera mangani zviwanikwa iwe auri kugona kuisa mune yako chitoro mufananidzo dhizaini. Kana iwe uri wakaomarara pane bhajeti, kana uchizeza kupaza mari, kana kushomeka kwechigadzirwa dhizaini, sarudza Shopify theme iri nyore, nyore kugadzirisa uye inouya nerutsigiro uye zvinyorwa zvaunogona kushandisa kune chero matambudziko ekugadzirisa pasi mutsara. Kune akawanda emahara e Shopify madingindira ayo akagadzirirwa kushandura kunyangwe iwo ari nyore mukugadzirwa.
Kana iwe usina ruzivo rwekugadzirisa madingindira, funga kutungamira kwakachena kune chero akanyanya kuomesa madingindira. Semuenzaniso, kana iwe usina zviwanikwa zvekugadzira mabhena akanaka, chingotarisa iwo maShopify madingindira anoisa tarisiro pane zvigadzirwa panzvimbo.
Mukupesana, iwe unogona kutarisa kana iwo dingindira rinopa yakakwira mwero wekugadzirisa. Izvo zvinogara zvichidikanwa kuve neiyo imwe nhanho yekugadzirisa mumawoko ako kana iwe uchimhanyisa yako yega yekudonhedza chitoro. Zvinhu zvakaita semapulagi plugins, maitiro, uye pre-akavakirwa addons anoita kuti iwo madingindira ave nesimba uye akuregedze iwe ugadzirire yako inodonhedza chitoro kune ako vatengi.
4. Kugadziridza uye Kutsigira
Bhizinesi rako richaitirwa internet, iro rinogara richichinja uye richichinja. Nekudaro, sarudza iyo Shopify theme iyo ine inoenderera yekuvandudza uye inopa rutsigiro kana iwe ukazviwana iwe uchinge wakanamatira mune mamiriro. Paunenge uchitsvaga weShopify theme, ive shuwa yekutarisawo inoenderana rutsigiro uye zvinyorwa zvinouya nemusoro wenyaya wese paShopify theme Chitoro kana vamwe vechitatu-bato vagadziri uye uve nechokwadi chekuti dingindira rako rinogara riine zvigadziriso uye zvitsva maficha.
Mazhinji Shopify madingindira anosanganisirawo kuongororwa kubva kune vamwe vatengesi. Iyi ongororo inogona kubatsira kutarisa kuti uone kana paine chero zviputi kana nyaya dzinosangana nevamwe vatengesi mushure mekuisa dingindira. Chimwe chinhu chekuteerera kune timu inotsigira vatengi uye mabatiro avanoita mibvunzo nezvichemo. Kana ivo vachikurumidza uye vachipa mhinduro kune vamwe, inogona kunge iri sarudzo yakanaka yetimu yekuenda nayo.
5. Wona Zvigadzirwa Zvako
Paunenge uchitsvaga kuburikidza nemhando dzakasiyana dzeShopify, unogona kutarisa kuti zvigadzirwa zvako zvichaita sei nemusoro wako mutsva usati watora dingindira kuchitoro chako kuitira kuti zvikubatsire kudzikisira chero misoro isina kuenderana neyako chiratidzo. Paunenge uchigadzira Shopify madingindira, ivo vagadziri vanoshandisa yakakwira-tsananguro, inonakidza uye inoratidzira mifananidzo mifananidzo kuti vagadzire madhizaini avo abude muchitoro cheShopify. Nekudaro, zvinogona kutaridzika zvakafanana kana iwe ukaisa iyo Shopify theme mune yako chitoro. Kana iwe parizvino usina yemhando yepamusoro zvigadzirwa zvigadzirwa, zvirinani kudzivirira Shopify madingindira ayo ane hombe chigadzirwa zvigadzirwa zvikamu.
6. Dhizaini Inokwezva Dhizaini
Vanhu vanobhadhara kutarisisa kukuru kune iyo saiti inotaridzika uye kana iwe uchangotanga kubuda, mushandisi mushandisi inonyanya kukosha. Iyo yakachengeteka nekushandisa yakapusa dhizaini iyo inowanzo kuve yakanakisa yekushandura vangangove vatengi uye mamwe akanakisa Shopify madingindira anozivikanwa uye anonzwisisika kune ako mutengi. Sarudza theme inonakidza inonakidza ine minimalist, yakapusa uye inoshanda interface kune vatengi vako.
Elements yeiyo Yakanaka Shopify Musoro
Iyo yakanaka Shopify theme inofanira kusanganisira zvimwe zvezvinhu zvinotevera:
Chikamu che "zvigadzirwa zvinogadzirwa"
Nzira yekumaka zvigadzirwa zviri kutengeswa
Bhawa yekutsvaga kana nzira iri nyore inosanganisira tabo, mamenu ehamburger kana matafura ekudonhedza pasi evashanyi kuti vatarise zvinhu
Iyo yakajeka uye iri nyore kuwana yekutengera icon icon
Batanidza kune mamwe akakodzera mapeji ewebhusaiti kana kuisa zvimwe zvigadzirwa zvinoenderana nekutsvaga kwemushanyi
Zvimwe zvinhu zvinogona zvakare kusimudzira yako saiti kutaridzika uye kunzwa, asi yeuka kuti usapfuure mushanyi wako.
Akanakisa Shopify Themes eDropshipping
Iyo yakanakisa Shopify theme kune rako bhizinesi inogona kupedzisira yasiyana zvachose nemusoro wenyaya uyo chitoro chinotarisa pane imwe niche yaizoshandisa. Iyo yakanakisa Shopify theme ndeye inokodzera bhizinesi rako 'aesthetics, pasina kutyora bhangi.
Heino runyorwa rweimwe dzenzvimbo kwaunogona kuwana akanakisa Shopify madingindira:
Iyo Yepamutemo Musika
Shopify Chitoro chemusoro: https://themes.shopify.com/
Dingindira Sango: https://themeforest.net/category/ecommerce/shopify
Template Monster: https://www.templatemonster.com/shopify-themes.php#gref
Troop Themes: https://troopthemes.com/
Kunze kweiyo Sandbox: https://outofthesandbox.com/collections/themes
PSDCenter Themes: https://themes.psdcenter.com/
Ndiri kushandisa CJ yezvishongo zvangu e-chitoro mubvunzo wangu une chekuita nenzira yekutumira kuUSA.
Nguva yekutumira yenzira dziri pasi apa inoremekedzwa here kana kuti kwete?
Cpacket YT US yakajairika: 7 kusvika 15 mazuva
USPS: 10 kusvika 20 mazuva
Zvakanaka here kushandisa zviri pamusoro kutumira zvishongo? ... Ona ZvimweOna Zvishoma
Saka ndakafara nenhamba yangu hombe yakamboitika, ndinoziva vanhu vazhinji vari kuwana huwandu hukuru. Zvisinei, ndinodada kuti ndakazviita pano parwendo rwangu 🥰 ... Ona ZvimweOna Zvishoma
Imi varume munotsanangurira sei mutengi kuti hapana waranti pazvigadzirwa? Chandinogona kuona paCJ igwaro remazuva gumi rekupokana iro sezviri pachena harivhare kukanganisa kwekugadzira 10-3 mwedzi pasi peiyo track kana chigadzirwa chikangoerekana chamira kushanda pasina chikonzero. ... Ona ZvimweOna Zvishoma
Nei CJ yakabvisa CNE post yeUK?
This was soo fast post!
Iwe unofanirwa kuwedzera machaneli matsva uye pachinzvimbo chekuti iwe unobvisa nzira dzekutumira dziripo! ... Ona ZvimweOna Zvishoma
Ndiri kuda anodonhedza mumiriri! ... Ona ZvimweOna Zvishoma
Tags cjdropshipping shopify, kuvaka sei chitoro, maitiro ekushambadzira kudonhedza pasi, shopu kudonhedza, shopu theme
← Chigadzirwa Photography Matipi eako Kudonhedza Chitoro → Zuva reValentine Pfungwa dzePurudzo Yako-pane-inoda Chitoro
© 2021	Sarudza yako Dropshipping Mentors yeDropshipping Course